ရုပ်ရှင်တွေထဲက သိပ္ပံကမ္ဘာကို ဖန်တီးပေးမယ့် ANA - JAPO Japanese News
ကြာ 17 Oct 2019, 14:26 ညနေ
ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ANA ဟာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပခရီးစဥ်တွေ အမြောက်အများကို ပျံသန်းပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိပြီး ခရီးသည်များစွာကို လိုရာခရီးဆီပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကုမ္ပဏီက အသစ်တီထွင်လိုက်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုအဖြစ် လေယာဥ်စီးဖို့မလိုတဲ့ခရီးစဥ်ကို ကြားရသူတိုင်း အံ့အားသင့်သွားခဲ့ရပါတယ်။
ANA Avatar ဆိုပါလား…
ဟုတ်ပါတယ် Avatar ရုပ်ရှင်ထဲကလိုပါပဲ။ မိမိကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပဲ မိမိရဲ့ပုံရိပ်ယောင်ကိုကိုယ်စားစေလွှတ်လိုက်တာပါ။
ရွေ့လျားသွားလာနိုင်တဲ့ ယာဥ်တွေကို တီထွင်တဲ့နည်းပညာတွေတိုးတက်လာပေမယ့် ကမ္ဘာ့အနောက်ဘက်ခြမ်းထိ ပျံသန်းသွားဖို့ဆိုရင် ဘယ်လောက်မြန်တဲ့ယာဥ်နဲ့ပဲသွားသွား နေ့၀က်နဲ့အထက်တော့ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရွေ့လျားဖို့မလိုတဲ့ Avatar ပုံရိပ်နဲ့ဆိုရင်တော့ မိမိရဲ့အိမ်ကအိပ်ရာထဲမှာနေရင်းနဲ့ စျေး၀ယ်ထွက်တာတို့ ပင်လယ်ရေအောက်ဟိုးအနက်ထဲထိ ရေကူးကြည့်တာတို့ ကောင်းကင်ကြီးထဲ ပျံသန်းနေတာတို့ စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရပါပြီ။
“အဲဒါက ပုံရိပ်ယောင်တွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ကမ္ဘာမဟုတ်ဘူးလား” လို့ သင်တွေးကောင်းတွေးမိပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် အမြင်အာရုံ၊ အကြားအာရုံ၊ အထိအတွေ့အာရုံတွေက တပြိုင်တည်း လှုပ်ရှားပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာ ပုံရိပ်ယောင်ဆိုတဲ့ အသိကပျောက်ကွယ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အာရုံခံစားမှုအစိတ်အပိုင်းလေးကပဲ ခဏတာအခိုက်အတန့်အတွင်း ကမ္ဘာတစ်လွှားကို ပျံသန်းရောက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
20 ရာစုနှစ်ဟာ ကားနဲ့လေယာဥ် အစရှိတဲ့ ရွေ့လျားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နည်းပညာတွေ အရမ်းကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်ကာလဖြစ်ပါတယ်။
အခုကတော့ ရွေ့လျားစရာမလိုပဲ ကိစ္စအတော်များများ လုပ်လို့ရတဲ့ ခေတ်ကာလကို ရောက်ရှိလာပါပြီ။
ငါးမျှားချင်ရင် ဒီဘက်ကိုလာနော်။ အိုအိတခရိုင်က ငါးကန်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ ပုံရိပ်ယောင်ငါးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလိုက်ပြီး စက်ရုပ်ငါးတွေက လှုပ်ရှားနေမှာဆိုတော့ တကယ့်အပြင်မှာ ငါးမျှားနေရသလို ခံစားရမှာနော်။
ဟင်းချက်ကြည့်ချင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဒီဘက်ကိုကြွပါ။
လက်ပဲပါတဲ့ စက်ရုပ်ကိုသုံးပြီး ဟင်းစမ်းချက်ကြည့်ကြမယ်။ အချိန်ပိုကြာကောင်းကြာနိုင်ပေမယ့် အရသာမြည်းလို့ရတဲ့အထိ ချက်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ တကယ်မချက်ကြည့်ဖူးလဲပဲ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်ဖူးသလို အတွေ့အကြုံတွေရစေမှာနော်။
ဒီစက်ရုပ်လေးကတော့ တကယ့်အပြင်မှာလှုပ်ရှားနေပြီး သူရဲ့ခံစားမှုအာရုံကို ထိန်းချုပ်သူဆီ ပြန်လည်ပေးပို့နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထဲမှာနေပေမယ့် အချိန်မရွေး လတ်ဆတ်တဲ့သဘာ၀တရားနဲ့ အေးမြတဲ့လေထုကို ရှုရှိုက်ခံစားရမှာနော်။
အောက်တိုဘာလ 15 ရက်နေ့မှာ စတင်ကြေငြာခဲ့တဲ့ သတင်းဦးလေးပါ။
လက်တွေ့မှာအဆင်ပြေပြေ သုံးစွဲနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တောင် ဒီလောက်တိုးတက်နေတဲ့ နည်းပညာခေတ်ကြီးထဲမှာ နှစ်အနည်းငယ်ကြာရင် ကျေနပ်လောက်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကို ဖန်တီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
လူကိုယ်တိုင် သွားလာလှုပ်ရှားမယ်ဆိုရင် လူလည်းပင်ပန်းသလို သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်အတွက်လည်း စွမ်းအင်တွေ ကုန်ဆုံးစေပါတယ်။ လူသားတွေအတွက်ရော ကမ္ဘာမြေကြီးအတွက်ပါ အဆင်ပြေကောင်းမွန်စေမယ့် ဒီစမ်းသပ်တီထွင်မှု မြန်မြန်အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်နော်။
မေလရောက်တာနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ကောင်းကင်ယံမှာ ငါးတွေကူးခတ်ကြ
ANAလေကြောင်းလိုင်းက အသစ်ပြမယ့်ဗီဒီယို !!!
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ စက်ရုပ်အစားထိုးမှုတွေဖြစ်နေပြီ!!!